इंग्ल्याण्ड २८ वर्षपछि सेमिफाइनलमा, गोल्डेन बुटका दाबेदार ह्यारीको अवस्था केछ ? – Everest Dainik – News from Nepal
इंग्ल्याण्ड २८ वर्षपछि सेमिफाइनलमा, गोल्डेन बुटका दाबेदार ह्यारीको अवस्था केछ ?
मस्को । रुसमा भइरहेको विश्वकप फुटबलमा स्वीडेनको यात्रा समाप्त भएको छ । यात्रा समाप्त इंग्ल्याण्डले गरेको हो । शनिबार साँझ भएको क्वाटर फाइनलको तेस्रो खेलमा उसले स्वीडनेलाई २-० ले हरायो । समूह विजेता बन्दै स्वीजरल्याण्डलाई पराजित गरेको स्वीडेनले इङ्ल्याण्डलाई भने हराउन सकेन ।
स्वीडेनसँगको जितले इंग्ल्याण्ड २८ वर्षपछि तथा तेस्रो पटक सेमिफाइनलमा पुग्न सफल भयो । यसअघि उ १९६६ र १९९० मा अन्तिम ४ मा पुगेको थियो । खेलको ३१ औं मिनेटमै इङ्ल्याण्डले अग्रता लिएको थियो । ह्यारी मगुइरले हेड मार्फत गोल गर्दै अग्रता दिलाए । पहिलो हाफमा १-० ले अग्रता लिएको इङ्ल्याण्डले दोश्रो हाफमा पनि १ गोल थप्यो त्यो पनि हेड मार्फत नै । खेलको ५९ औं मिनेटमा गोल गर्दै डेली अलीले इङ्ल्याण्डलाई जीतउन्मुख बनाएका थिए ।
त्यसपछि दुवै टोलीबाट गोल हुन सकेन र कोलम्बियालाई टाइब्रेकरमा पराजित गर्दै अन्तिम क्वाटर फाइनलमा स्थान बनाएको इङ्ल्याण्ड सेमिफाइनलमा पुग्यो । यी दुई टोली पहिले भएका १२ भेट स्वीडेनको पक्षमा भएपनि इतिहासले काम गरेन । पहिलेका ६ खेल बराबरीमा,स्वीडेन ४ खेल र इङ्ल्याण्डले दुई खेलमा विजयी भएका थिए ।
यसअघि यी दुई टोलीबीच भएका विश्वकप छनोट र समूह चरणका चारै खेल बराबरीमा टुङ्गिएका थिए । इतिहासलाई तोड्दै विश्वकपमा इङ्ल्याण्डले पहिलो जीत दर्ता गरेको हो ।समूह चरणमा इङ्ल्याण्ड बेल्जियमसँग पराजित भएको थियो भने स्वीडेन जर्मनीसँग पराजित भएको थियो । इङ्ल्याण्डलाई हराएको बेल्जियम ब्राजिललाई पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ ।
यो विश्वकपमा ६ गोल गरिसकेका इङल्याण्डका ह्यारी केन गोल्डेनबुटको होडमा सबैभन्दा अगाडी छन् । विश्वकपमा इङ्ल्याण्डको १५ औं सहभागीता हो । उ अहिलेसम्म एक पटक उपाधि जितेको छ भने एक पटक सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको छ । इङ्ल्याण्डले १९६६ मा विश्वकपको उपाधि उचालेको हो । यो इङ्ल्याण्डको तेश्रो सेमिफाइनल यात्रा हो । –एजेन्सी
ट्याग्स: England Vs Sweden, Englind, Harry Kane